Waxay nagu Qasbeen inaan Qoraal-xume ka-dabe-qore noqonno!!!
Qore: Muhumed Hersi (Nugidoon)
Waxa la yidhi oday wiilal badan dhalay, oo wiilashuu dhalay dhammaantood reero leeyihiin oo Eebbe xoolo badan siiyay, hasayeeshee markaa gaboobay oo af-ka hadalkuuni la itaal yaahay. Ayaa markay xooluhu soo hoyaanayaan ay caadadiis ahayd inuu yidhaa: " niriggii ina heeblaayo caawa masoo hoyan. Ceesaantii kolmoolay caawa masoo xero gelin. Laxday daylo mayday ma dacawo(dawoco) ayaa cuntay?. Baar-qabkiina mee? iwm".
Wiilashiisu, may jeclaysan odaygan hataatacaya, waxayna dhhammaantood isku raaceen si wada jir ah inay ula hadlaan, iyagoon u kala hadhin. Way la hadlayn , waxayna yidhaahdeen: "Aabo, nin weynbaad noqotay hadalka badanina kuuma fiicna, aanana waan dhibsanaynaa, ee iska aamus. Ta-labaad rag waaween baan nahay oo xil kasa ah, oo xoolo og , oo foojigan ee anaga nagu halee, waxba tasoobi maayaane". Odaygii sidii inamadiisu ka codsadeen ayuu yeelay, oo wuu iska aamus. Maalmo yar ka dib ayuu odaygii waraaqay isagoo sida dameeraha u qaylyaya. Wiilashiisii inatay naxeen , haddana qosleen; ayay waxay yidhaadeen: "awalbuu roonaa oo u hadli jiray, Tolow miyuu waashay oo wajaqay! Maantana miyuu sidii dameerka u ciyayay"!
Raggu iskuma jiree, midbaa hadloo yidhi: " ha la yaabina , waynagii amuus nidhi,balantii aynu qaadnayse maynaan fulin, waayo dameerihii ayaan tasaynay oon soo xero galin, wuxuu inoo sheegayaana waa intaasuun ee wax kale ma aha "!
Waxaad arkaysaa rag waawayn oo lasoo shir tagayaa kuna soo qoraya madasha cid weliba akhrisanayso, kacaanku wax dhibaato la sheego oon ka ahayn musuq-maasuq iyo maamul xumi muu samaynin,jabahaduhuna qabiil-ku-dirir bay ahaayeen ee xaq-u-dirir may ahayn!!
Mudug & Bari:
Waxaa is waydiin mudan ayaa xasuuqay beelo dhan oo reer mudug ah, dad, duunyo,dalag, bar, beer, baad,barkado, buul iyo maalbaa, xataa xaafado iyo tuulooyin dhan ayaa cagta la mariyay? Ma ciidamadii Tataarka ee reer Mongooliyaa ee uu Gengis Kublai khan hogaaminaayay ayay ahaayeen kuwii xasuuqa gaystay?
Muqdisho, Afgooye,Balacad, Jowhar iyo jiiddaa ku gedaaman dadkii asal ahaan u dhashay, markay dhib iyo dheefba marti ku noqdeen goobtay ku dhasheen, wadankay dhismihiisa wax ku la haayeen ee ganacsatadii, maamulkii dawladda, waxbarashadii looga dacareeyay.Ee sidii madowgii Reer Koonfur Afrika, maalintiina xaamaalka ka ahaa Johanesberg, fiidkiina u caraabayay duleedkeeda oo kale u noolaadeen. Intaas ay u dheerayd xadhig, caddaaladarro, caga juglayn joogta ah.Maxaad ka filaysaa markaa dadkaa la dulmay inay sameeyaan, bal adigaan ku weydiiyee?
Woqooyi hayb ugaadhsi ba'an oo mamsan ayaa ka socday lagasoo bilaabo 1975 ilaa dagalkii sokeeye dhaammadkiisii, hadba heer u gaadhsanaadaba. Xataa waxa la isku dayay dadkii dalka u dhashay inta la gumaado, dad meelo kale laga keenay lagu beero sidii ka dhacday, North America, Central America, South America, Careebian Islands, Australia, New Zealand iwm.Waxa kaloo si hufan looga xayuubiyay ilihii dhaqaale ay ku noolaayeen,markay carabaha u shaqo tageen. Kacaankii ayaa heshiis la galay dawladihii carabta, gaar ahaan kuwa khaliijka iyagoo adeegsanayaa Danjireyaasha Somalia u fadhiya dalalkaas, in dadka hayb ahaan ka soo jeeda kuwa lagu daba jiro ee shaqooyin dhaqaale wanaagsan leh ka sheeqeeya loo soo mustaafuriyo Somalia. Markay madaarka Muqdisho, Hargeysa ama dekadda Brebera laga soo dhaadhiciyana, hor jeelka laga geeyo, ka dibna aan dib loo arag maal iyo aduun waxay siteenna laga dhaco!
Mansab dawladeed iyo wax barasho sare oo dibad loo diro iyada hadalkeeba is ka ilow!
Dibaatoonyinka iyo aafooyinka aan kur ku soo xusnay iyo qaar kaloo badan aynaan halkan kaga bogan karin, ayaa sababay in la curiyo jabahado hubaysan aan gabasho lahayn . Waxa la yidhi: "dhariga maxaa karka ka keenay? Waa, kulayl"!
Jabahadaha waxaa hormood u ahaa SSDF, SNM, USC.
Heeryadii habaarnayd ayna Soomali u dhalan balse ku habsatay, ayaa laga gilgishay si raganimo leh, oo aan gabasho lahayn. Taliskii macangagga ahaa ayaa la baacsaday,geedkuu gelaba waa lagu gubay, gotkuu gelaba waa laga daba geley, goobtuu istaagaba waa lagaga dayaanshay! Ilaa nafi oradbay kugu aamintaye, u cagaha wax ka dayay! Iminkana hadhaagiibaa Doofaaralay isku urursaday. Wallee dhurwaa aan ogahay reer ma yagleelo!
Markii dagaalka sokeeyee bilaamayna, Woqooyi, cir, dhul iyo badba waa laga soo weraray, sidii dagaalkii Vietnam iyo Maraykanka dhex maray.Taliskii macangaga ahaa si uu gumaadkuu ku taamaayay meel mar u noqdo, duliyaal caddaan ah oo reer Koonfur Afrika ah, oo dhiiga dadka madow ku mamay una miliqsanaya sida yayda, waayo aragnimo heer sare ahna u leh sida cirka wax looga garaco, ayuu soo kiraystay. Magaalooyin dhanbaa laga dhigay dakan-dakan (carpet bombed to ruble with no descrimination).Jaamacadda carabtuna bansiinka(bitroolka) iyo qarashka dagaalka ayay la barbar taagnayd ahbalnimadeeda!!
SSDF waxay ku curatay Puntland. SNM-na waxay ku curatay Somaliland, maamulkiina waxay gacanta u gelisay dadweynaha reer Somaliland. Doorashooyin dimuqraadiya ayaa ka hir galay. Axsaabta(xisbiyo) badan ayaa la hir gashay,mahadho ayaa halkaa ka dhacday dibna looma noqon doono.
Xaggay ku danbasay USC?
USC iyadoo fool ka eeg ah aseen weli waxba dhalin, ayay niman aan goobta dagaalka (Saaxat-al-macrakah) sidaa uga muuqan oon firfircooni badan muujin, dhexda ka maroorsadeen, waa Cali Mahdi iyo koox markaa ujeedadooda u weyni ahayd, in Ciyaar yahaynkii caankaa ahaa ee wacdaraha dhigay, xataa dawladdii aduunka ugu xoogga weynad (U.S.A) ciidankeedii u kabo geliyay ee Washington u soo diray,ee finalka isku soo taagay, waa Maxamad Faarax Caydiid-e, aanu hasha gaawaha ugusoo culan. Maxaase ka raacay, waa laysku dul qabsaday, deetana sidii hadba dhan loo erayayay ayay dhicisay! Waan ka xumaahay.
Guntii iyo gebgebadii, waxay nagu qasbeen inaan qoraal-xume ka-daba-qore noqonno. Sidii odaygii aan kor ku soo xusnay ayaan is hayn kari waayay. Maxaa yeelay, waxaad qub iyo qacba u soo joogtay niman ku marsiinaya waxaan jirin, ama siday ahayd aan runta ka sheegayn, inaad ka aamustaa waa gef aan damiir iyo dadnimo toona ku lifaaqnayn.